Seddex fure sababta PUBG: Gobolka Cusub uu u noqon karo dhamaadka PUBG Mobile | Androidsis
Haaruun Rivas | | Ciyaaraha Android, PUBG Mobile
PUBG Mobile waa, oo ay weheliso Call of Duty Mobile iyo Garena Fire Fire, mid ka mid ah royaleska dagaalka ee ugu badan ee mobilada. Ciyaartani waxay leedahay malaayiin isticmaale caalami ah, sidoo kale inay ka mid tahay cinwaannada soo saara lacagta ugu badan ee Google Play Store.
Bilihii la soo dhaafay, warbixino kala duwan ayaa soo daadanayay oo tilmaamaya PUBG cusub. Qaarkood waxay u bixiyeen PUBG 2.0, laakiin dhowr maalmood waxaan ogaanay in la sii deyn doono isla markaaba PUBG: Gobol Cusub. Ciyaartan cusub ayaa noqon doonta tartan kale oo loo maro PUBG Mobile, in kasta oo ay ka soo wada jeedaan isla dadka ka socda shirkadda PUBG. Tani waa halka Tencent iyo Krafton, oo ah laba istuudiyaha caanka ah ee muhiimka ah ee fiidiyowga ciyaarta, ay is arki doonaan, iyagoo cabiraya garbaha garabka.
1 Miyuu PUBG Mobile ku dhiman doonaa gacanta PUBG: Gobol Cusub?
1.1 Hackers jabsade ah
1.2 Adeegyo wanaagsan oo loogu talagalay daahitaan hoose
1.3 Majiro giraangiraha roulette iyo hargaha qaaliga ah
Miyuu PUBG Mobile ku dhiman doonaa gacanta PUBG: Gobol Cusub?
Tan iyo markii la sii daayay PUBG: Muuqaalka Gobolka Cusub, saameynta ka dhex jirta bulshada PUBG guud ahaan wey fiicneyd. Ciyaartoyda Mobile-ka ee Tencent ee PUBG, ciyaar la sii daayay ku dhowaad saddex sano, waxay u aragtay si wanaagsan, laakiin dhammaantood maahan. Waxaa jira farxad qaar ka mid ah, halka kuwa kale aysan dooneynin soo saarista cinwaan cusub oo la tartami doona PUBG Mobile, ugu yaraan si toosa uma ahan.
PUBG: Gobol Cusub wuxuu hayaa nuxurka PUBG Mobile, ama taasi waa ballanqaadka, laakiin jawiga mustaqbalka ee 2051. Sidaa darteed, waxaa jiri doona gawaari kala duwan, khariidado iyo walxaha taatikada, iyo sidoo kale waxyaabo kale oo aan gadaal ka ogaan doonno. Laakiin ... tani miyey ku filnaan doontaa PUBG Mobile inuu dhinto?
Ujeedada loo aasaasay PUBG: Gobolka Cusubi maahan in PUBG Mobile ay ciyaartoy ka dhamaadaan iyo in dagaalka royale uu kursi dambe ka qaato, meel ka fog. Si kastaba ha noqotee, tani waa waxa dhici kara haddii ciyaarta cusubi ay sifiican u fiicantahay oo ay u hogaansanto saddexda fure ee soo socda (iyada oo aan loo kala hormarin mudnaanta), kuwaas oo dhibaato weyn ku ahaa PUBG Mobile, taasoo sababtay qanacsanaanta ciyaartoy badan:
Hackers jabsade ah
Mowduuca dadka wax jabsada ayaa ahaa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee PUBG Mobile soo maray. Xilliga 15aad, aan xusuusnaano, waxay ahayd markii ay u adkeysan weyday. Inbadan waxay ahaayeen ciyaartooy ka cawday muuqaalada aan la tirin karin ee ciyaartoy kale ay lajireen «Chetos»Taasi waxay dhaawacday khibraddii ciyaarta, iyadoo la yeelanayo barnaamijyo iyo barnaamijyo ay ku leeyihiin faaiido aan caadi ahayn oo aad uga weyn kuwa kale. Qaar ka mid ah hacks inta badan la isticmaalay waxay ahaayeen anteeno, kaliya madax xanuun iyo xawaare aad u sarreeya.
Nasiib wanaag, Tencent waxay adeegsatay tallaabooyin iyada oo loo marayo cusbooneysiin ku dhowaad gebi ahaanba baabi'isay dhibaatadan, sidaas darteed hadda waa dhif iyo naadir in la helo haakarisyo ciyaaraha caadiga ah.
Si kastaba ha noqotee, dhaawaca ciyaarta wuxuu ahaa, qeyb ahaan, aan laga soo kaban karin. Inbadan waxay ahaayeen ciyaartoydii gebi ahaanba katagtay PUBG Mobile, ayaa ka careysiisay inay darajayn kari waayeen, waxayna u guureen CoD ama Fire Free for arintaas, si aad u badan oo soo dejinta PUBG Mobile ay si weyn hoos ugu dhacday waqtigaas.
Haddii PUBG: Gobolka Cusub uu ilaaliyo haakarisyadu marwalba oo ay damaanad qaadaan khibrad ciyaartooyo la'aan ciyaartooyada leh lacagaha lagu bixiyo barnaamijyada sharci darrada ah, waxay shaki la'aan noqon doontaa xulasho ka xiiso badan PUBG Mobile dad badan.
Adeegyo wanaagsan oo loogu talagalay daahitaan hoose
PUBG Mobile wuxuu leeyahay adeegyo badan oo adduunka ah, sidaa darteed waxaa lagu ciyaari karaa ficil ahaan meel kasta. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo xaqiiqda ah in ciyaartu ay leedahay server-yo la geeyay aagagga muhiimka ah si ay u bixiyaan xiriir wanaagsan iyo daahitaan ciyaartoy, kiiska Latin America wuu ka duwan yahay.
Intii ay joogeen Yurub, Mareykanka iyo Aasiya ficil kasta oo ciyaartoy ah wuxuu si fudud ugu tiirsanaan karaa daahitaan xasilloon oo ka yar 100 ms oo ku saabsan adeegyadooda, Latin America iyo qaar ka mid ah waddammada Bartamaha Ameerika si dhib yar ayey u leeyihiin daahitaanno u dhexeeya 150 iyo 200 ms celcelis ahaan, xitaa internet fiican.
Ciyaaraha royale ee dagaalka sida kuwan oo kale, daahiddu waa tan ugu muhiimsan khibrad wanaagsan. Waa riyo maalmeedka dad badan oo qaba ping ka badan 100 ms inay la kulmaan ciyaartoy leh ping ah 20 ms; kiisaska badankood (marka laga reebo xirfadda), midka ugu daaha fiican ayaa ku guuleysta ciyaarta.
Sidaa darteed haddii PUBG: Gobolka Cusub uu damaanad qaadayo server-yada adduunka oo dhan oo bixin kara daahitaan wanaagsan dhammaan ciyaartoydeeda, iyada oo aan loo eegin gobolka, waxay heli kartaa tiro badan oo ciyaartoy ah laga bilaabo xilliga la bilaabay.
Majiro giraangiraha roulette iyo hargaha qaaliga ah
Dad badan ayaa isku raaci doona taas PUBG Mobile waa ciyaar aad qaali u ah. In kasta oo ay bilaash tahay soo dejinta, rakibidda, iyo ciyaarta, waxyaabaha lagu dhex iibinayo ciyaarta dhexdeeda, oo ka bilaabma maqaarka hubka illaa casriyaynta dharka, waxay ku kici kartaa boqollaal doollar
PUBG: Gobolka Cusub wuxuu ka faa'iideysan karaa tan oo wuxuu siin karaa maqaarro iyo walxo ka jaban oo taageeraya jeebabka ciyaartoyda. Intaa waxaa sii dheer, haddii aad alaab si toos ah iyo qiimo go'an u siiso, iyadoon lahayn shaagagga roulette ee nasiibka u baahan sida kiiska PUBG Mobile, in ka badan hal ciyaaryahan ayaa xiiseynaya kuwan. Tani waxay noqon laheyd hab daacadnimo badan oo lagu bixiyo maqaarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Saddex fure sababta PUBG: Gobolka Cusub wuxuu noqon karaa dhamaadka PUBG Mobile
Ku soo biir kumanaanka ciyaartoy ee ku raaxeysanaya Golf-ka aan caadiga ahayn
Wadarta Eggscape waa ku cusub tahay Ciyaaraha Bisha Dayax madal madadaalo madadaalo leh